I-T-Mobile yethula inethiwekhi kazwelonke i-5G ongeke ukwazi ukuyisebenzisa kuze kube uLwesihlanu, ekuqaleni-BGR - Tamban RELAY
Accueil » UMNOTHO I-T-Mobile yethula inethiwekhi kazwelonke ye-5G ongeke ukwazi ukuyisebenzisa kuze kube uLwesihlanu, ekuqaleni-BGR
I-T-Mobile yethula inethiwekhi kazwelonke i-5G ongeke ukwazi ukuyisebenzisa kuze kube uLwesihlanu, ekuqaleni - BGR
UT-Mobile ukhahlele isonto ngesigameko esiyingqophamlando. Kube opharetha bokuqala base-US ukuthi bathi bavule inethiwekhi kazwelonke ye-5G leyo I-T-Mobile ikhombisa lokho imboza cishe abantu abayizigidi ze-200. Ngokusho kwemephu esembozweni ekhishwe ngoMsombuluko yiT-Mobile njengengxenye yokumenyezelwa kwayo, inethiwekhi entsha esebenzisa isibuko seT-Mobile's 600 MHz ifaka ngaphezu kwe-60% yabantu baseMelika ngaphezu kwamakhilomitha skwele ayisigidi ingxenye enkulu yayo yayihlanganisa izindawo zasemakhaya.
Lokho isikhangiso se-T-Mobile esingamemezeli - esiphathiswa kuzoqala nje ukuthengisa izingcingo ezisekela le nethiwekhi ngoLwesihlanu, kuyilapho i-OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition (899,99 $) ne-Galaxy Note 10 + 5G ( Ama-1 299,99 $) womabili athengiselwe amakhasimende we-T-Mobile.
Vele, lesi isikhangiso se-T-Mobile, okusho ukuthi amaphuzu amaningi wokukhishwa kwezindaba abuye athathe nezithombe zezimbangi ezifana neVerizon (Njengalapha - "T- The Mobile 5G Pass udonga, iVerizon 5G ivinjelwa izithiyo ezinjengodonga, amawindi namaqabunga. "Futhi, lapha -" iVerizon ne-AT & T (5G) isebenza kuphela emadolobheni athile futhi ungacacisi zingaki? izinyawo?) zimboza. "). Okwamanje, uma umangazwe, iya ku www.t-mobile.com/5Gmap ukubuka imephu yokwemboza esebenzisanayo futhi evuselelekayo ukuze ubone kufinyelela ezingeni lomakhelwane elizothola ukumbozwa kwe-5G, nokuthi kuphi.
Umthombo Wezithombe: T-Mobile
"Kwa-T-Mobile, sakha ubuchwepheshe be-5G obusebenzela abantu abaningi ezindaweni eziningi, futhi lokhu kumane nje kuyisiqalo," kusho uNeville Ray, uMongameli weTekhnoloji eT-Mobile, e- isitatimende. "Nge-T-Mobile entsha, sizobona isivinini se-5G silandela indlela efanayo ne-LTE, sanda ngokuhamba kwesikhathi ngokuhamba kwesikhathi. Ngaphezu kwalokho, i-5G ebanzi nejulile izokwakha izigaba ezintsha zokusungula izinto ezizothinta cishe yonke imikhakha yezomnotho. "
Isimemezelo sangoMsombuluko asisho ngemininingwane ngamajubane ongawasebenzisa ngenethiwekhi entsha. Futhi hhayi lokho kuphela, ukusebenza kuzophinde kubonakale kungafani nendawo - okhulumela i-T-Mobile utshele iThe Verge ukuthi kwezinye izindawo imvamisa i-5G 600 MHz "izoshesha kakhulu kune-LTE. Kwamanye, amakhasimende ngeke abone umehluko omkhulu kangako. "
Abakwa-T-Mobile bathi lezi zingcingo ezimbili ze-5G okukhulunywe ngazo esezisungulwe ekugcineni kwaleli sonto zizokwazi ukusebenzisa inethiwekhi entsha ye5G, uma ikhona, futhi isebenze kunethiwekhi ye-T-Mobile kazwelonke ye-TTE kwenye indawo. Ngaphezu kwalokho, uma ukuhlanganiswa kwesiphathi ne-Sprint sekuphelile, womabili amafoni nawo akulungele ukusekela isibonisi se-Sprint's 5G, uma sisebenza.
Ukugubha ukwethulwa kwenethiwekhi ye-5G, i-T-Mobile inikeza lokhu okulandelayo: Amakhasimende angathola i-OnePlus 7T Pro 5G. UMcLaren mahhala ngama-24 amanothi wesikweletu uma eshintshela ku-T-Mobile futhi eshintshana ngocingo olufanele. Bangathola futhi ithikithi lamahhala le-Kumbuka10 + 5G elinamakhredithi we-24 uma bethenga enye futhi befaka umugqa (imigqa emibili yamakhasimende amasha).
Umthombo wesithombe: Utrecht Robin / Action Press / REX / Shutterstock
I-Apple kungenzeka icabangele ushintsho olukhulu ekwethulweni kwe-iPhone yayo ngemuva kwe-iPhone 12 - BGR
Iphrojekthi ye-2020 ye-Ejensi Yezimali: Kuthunyelwa Intela entsha Yangaphandle